Olee otu ndi nchoputa si hu ma pinye aka na ihe nchọta nke Google | Martech Zone
Kedu ka ndị nchọta si ahụ wee pịa nsonaazụ Google na a Nchoputa Nchoputa Nchoputa (SERP)? N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ agbanwebeghị ọtụtụ afọ - ọ bụrụhaala na ọ bụ naanị nsonaazụ organic. Agbanyeghị - jide n'aka na ị gụchara akwụkwọ akụkọ na-eme ka ọ bụrụ ebe ha tụlere usoro SERP dị iche iche na nsonaazụ ha n'ime nke ọ bụla. Enwere ọdịiche pụtara ìhè mgbe Google nwere atụmatụ ndị ọzọ gụnyere na SERP dị ka carousels, map, na ihe ọmụma eserese ọmụma.
Otu saịtị dị elu ka na-enweta 83% nke nlebara anya na 34% nke clicks na SERP.
Mgbasa ozi amụọla nke a wee nye a nnukwu ihe ngosi nke ahụ na-emekọrịta mmekọrịta dị n'etiti ndị na-enyocha na mgbasa ozi nkwado, carousels, ndepụta mpaghara, na ndepụta aha. Pịa na infographic dị n'elu iji hụ ya n'ozuzu ya.
Ndị mmadụ anaghị emekọrịta na peeji nchọta nchọta nchọta Google n'otu ụzọ ahụ ha mere afọ iri gara aga, nke kachasị n'ihi iwebata ihe ọhụụ na SERP na mgbakwunye na ndepụta ederede (mgbasa ozi akwụ ụgwọ, nsonaazụ carousel, eserese ihe ọmụma, ndepụta mpaghara wdg. ). Ebee ka ọ dị, ndị na-enyocha ga-ewepụta oge ha ka ha nyochaa ndepụta aha n'elu site n'aka ekpe gaa n'aka nri, na-agụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ aha zuru ezu, tupu ha agbada na ndepụta na-esote, ihe anyị na-ahụ ugbu a bụ nyocha ngwa ngwa ngwa ngwa. na ndị na - achọgharị naanị na - agụ mkpụrụ okwu 3-4 izizi nke ndepụta.
Ọ bụ ezie na ndepụta nke kachasị elu na-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu clicks dị ka ọ mere 10 afọ gara aga, anyị na-ahụ ugbu a ihe karịrị 80% nke clicks niile na-eme na ebe dị elu karịa ndepụta nke 4th, nke pụtara na a ga-edepụta azụmaahịa n'otu ebe na mpaghara a SERP iji mee ka okporo ụzọ ha dị elu na saịtị ha. Rebecca Maynes, Onye mgbasa ozi
Fọdụ pụta ìhè omume:
Naanị 1% nke ndị ọrụ ọchụchọ na -ebugharị na ibe na-esote
9.9% nke clicks na SERP na-aga na mgbasa ozi nkwado dị elu
32.8% nke clicks na-aga na ndepụta # 1 ndepụta ndepụta na SERP
Download Mediative's Whitepaper
Tags: carouselpịa-site ọnụegoctrn'usoroomume nyocha igwensonaazụ nsonaazụ ọchụchọsearch resultsAagwoỌpịpị pịasert ctrserp ndepụtankwado mgbasa ozi